people Nepal » रक्सी पिएपछि मानिसहरु किन अंग्रेजी बोल्छन्? रक्सी पिएपछि मानिसहरु किन अंग्रेजी बोल्छन्? – people Nepal
रक्सी पिएपछि मानिसहरु किन अंग्रेजी बोल्छन्?
Posted on October 22, 2017 by Purna Nanda Joshi
एजेन्सी, २ कात्तिक । रक्सी पिएपछि कहिल्यै अंग्रेजी नबोलेका मानिसले पनि फरर यो भाषा बोल्न थाल्छन् । अरू बेला फिटिक्कै नबोल्नेले एक्कासी अंग्रेजी बोल्न थालेपछि माहौल नै फरक हुने गर्छ । रक्सी पिएपछि मानिस किन यसरी अँग्रेजी बोल्छन् त ?
बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले यसको कारण पत्ता लगाएको छ । रक्सी पिएपछि मानिसको आत्मविश्वास बढ्ने र तनाव घट्ने उक्त अध्यययले देखाएको हो । अध्ययनका अनुसार आत्मविश्वास बढ्ने र तनाव घट्ने भएपछि मानिस अरुसँग नडराउने गर्छन् र फलस्वरूप मानिसले अरूसँग विदेशी भाषामा गफ गर्न सुरु गर्छन् ।
अध्ययनमा संलग्न गराइएका मानिसमध्ये रक्सी पिउनेले विदेशी भाषा बोल्ने गरेको पाइएको थियो । रक्सी सेवन गर्नेले दुइटा भाषा सजिलै बोल्ने गरेको पाइएकाे थियो । तर यससम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भाषाविज्ञले बताएका छन् ।
यस्तो छ दशैंको टिका लगाउँदा दिइने आशिषको अर्थ
‘कम्फरटेबल अदालत’ का लागि हमाल देखाएर अर्कैतिर हमला
आज नवरात्रको पाँचाै दिन स्कन्दमाताको आराधना गरी मनाइदै
दसैंका सामान उत्तरी नाकामै रोकिए
PeopleNepal Pvt Ltd,
सुचना बिभाग दर्ता नं. : २४८/०७३-७४
Director :- Tara Nidhi Panta
Editor :- Durga Panta
Reporter- Uddhab Raj Tripathi, Raj Panta, Purna Nand Joshi, Swastika Panta,Prem Moktan (Hong Kong)
©२०१६ People Nepal/सर्वाधिकार सुरक्षित